Sidee loogu cusbooneysiiyaa LG G Watch ilaa nacnaca gacanta | Androidsis
Francisco Ruiz | | Smartwatch, Tababarada, Noocyada Android
Daal sugitaan cusbooneysiinta tooska ah ee OTA ee LG G Watch taasi waa inay cusbooneysii Android 5.0.1 Lollipop iyada oo horumarin badan laga helayo taas oo ah hab cusub oo loo abaabulo Hargaha Saacadaha, daah cusub ama daah toos ah marin loogu helo astaamaha cusub ee nidaamka ama ka fiicnaan la'aanta batteriga. Waxaan go'aansaday inaan ku cusbooneysiiyo gacanta anigoo ku soo dejinaya OTA kombiyuutarkayga shaqsiga ah ee leh nidaamka hawlgalka Windows una sharaxayo dhamaan nidaamka rakibida gacanta iyaga. Nidaam aan nagu qaadan doonin wadar ahaan in ka badan toban daqiiqo.
Marka hadda waad ogtahay, haddii aad jeceshahay waxa aad ku aragtay fiidiyowga xagga sare ee maqaalkan ama casharrada wax ku oolka ah, ee aan ku sharxayo hagaajinta muhiimka ah ee lagu soo daray cusbooneysiintan rasmiga ah ee loogu talagalay LG G Watch, ha moogaanin habka rakibida fudud ee cusbooneysiinta gacanta ee bartaada 'Wear terminal'.
1 Sida loo cusbooneysiiyo LG G Watch ilaa 5.0.1 Lollipop gacanta
2 Sida loo furo bootloader LG G Watch
3 1aad - Furitaanka Bootloader LG G Watch ah
Sida loo cusbooneysiiyo LG G Watch ilaa 5.0.1 Lollipop gacanta
Si loo cusbooneysiiyo LG G Watch ilaa 5.0.1 gacanta waxaan ku qasbanaaneynaa inaan dhowr waxyaabood sameyno, ugu horreyntii firfircoonaanta USB-ka ee kumbuyuutarka laftiisa, sida tan Android, waxaa lagu gaaraa marka ugu horreysa ee la awoodo menu-ka horumarinta. weli ku qarsoon yahay Android Wear, si aan u kicinno waxaan kaliya u baahan nahay inaan galno Settings / ku saabsan / num. soo uruurinta oo guji si isdaba-joog ah illaa ay ka tusayso inaan hore u nahay horumariyayaal.
Fiidiyowgan ku lifaaqan waxaan kuugu sharraxayaa adiga tallaabo tallaabo ah si aysan u jirin meel shaki ku jiro:
Sida loo furo bootloader LG G Watch
Kahor intaadan bilaabin casharro wax ku ool ah si loo cusbooneysiiyo LG G Watch ilaa 5.0.1 Lollipop, waa inaan marka hore hubinaa inaan haysano Android SDK oo lagu rakibay kumbuyuutarkeena shaqsiyeed ee wata nidaamka hawlgalka Windows. Tani waa lagama maarmaan maadaama aan u adeegsaneyno Shell ama daaqadda amarka Furo Bootloader-ka LG G Watch, xididka xarunta, ku cusbooneysii Android 5.0.1 Lollipop OTA iyo ugu dambeyntii in la xayiro bootloader markale si ay u awoodaan inay sii wadaan helitaanka cusboonaysiinta OTA si caadi ah mustaqbalka.
El Android SDK waxaad awoodi doontaa inaad si fudud u rakibto adigoo raacaya casharradan wax ku oolka ah in aan sameeyay waqti ka hor. Marka la rakibo, waxay ku habboon tahay in dib loo bilaabo kumbuyuutarka shakhsi ahaaneed. Markaan dib u bilowno waxaan ku xiri karnaa saldhiga lacag bixinta dekedda USB-ga ee PC-ga ee aan rakibnay Android SDK. Waxaan ku dhejineynaa saacadda saldhiggeeda amarka oo aan sugeyno Windows wuxuu rakibaa darawalada lagama maarmaanka ah si LG G Watch loo aqoonsadoXusuusnow in khaladka USB-ka ee saacaddu ay tahay in la hawlgaliyo sida aan ku sharaxay fiidiyaha kor ku xusan.
1aad - Furitaanka Bootloader LG G Watch ah
Marka dhammaan waxyaabaha kor ku xusan la sameeyo oo saacaddu ku xiran tahay saldhiggeeda amarka oo ay ku jirto kombuyuutarka adb adb debugging firfircoonaan, waa inaan sameynaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan u dhaqaaqnay wadada C / Faylasha Barnaamijka / Android / android-sdk / qalabka-madal oo guji badhanka SHIFT oo lagu daray midigta guji waxaana u sheegeynaa inuu na furo daaqad amar ah halkan.
Hadda waxaan gujineynaa amarradan:
Adb reboot-bootloader - tani dib uma bilaabi doonto terminal-ka qaabka loo yaqaan 'fastboot'.
Tan waxaan ku furaynaa bootloader-ka LG G Watch. Hadda waxaan aadi doonnaa xididka LG G Watch:
Midka ugu horeeya wuxuu ahaan doonaa soo dejiso faylkaan kuna dhaji dariiqa aan soo sheegnay. Maaddaama aan horeyba ugu jirno qaabka fatboot, daaqadda amarka waxaan ku qori doonnaa amarka soo socda kaas Xididka LG G Watch mahadsanid faylka horey loo soo dejiyey:
fastboot boot lggwroot.img oo guji ENTER
Hadda terminaalku waa inuu dib isu bilaabaa, haddii kale, kaliya qor amarka soo socda si aad dib ugu bilowdo LG G Watch:
Hadda tallaabada xigta waxaan Waa inaan kala soo baxnaa cusbooneysiinta Android 5.0.1 Lollipop iyadoo loo eegayo nooca Android Wear ee aan ku leenahay LG G Watch. Sida caadiga ah waxay noqon doontaa nooca 4.4W2, in kastoo qaar ka mid ah isticmaaleyaashu ay wali la jiri karaan noocii hore, markaa soo dejiso OTA ee Android 5.0.1 Lollipop sida ku cad nooca hadda jira ee nidaamkaaga qalliinka:
Lollipop-ka Android loogu talagalay kuwa ka imanaya 4.4W1
Lollipop-ka Android loogu talagalay kuwa ka imanaya 4.4W2
Waxaan horeyba kuugu sheegayaa in waxa ugu badan ee caadiga ahi ay tahay inaad soo degsato nooca loogu talagalay 4.4W2 oo ah casriyeyntii ugu dambeysay ee LG G Watch ay si rasmi ah u heshay. Markii aan soo dejino waxaan nuqul ka sameysan doonnaa wadada C / Faylasha Barnaamijka / Android / android-sdk / qalabka-madal y Waxaan dib u cusbooneysiin doonnaa si loo cusbooneysiiyo .zip.
Waxaan dib ugu xireynaa LG G Watch saldhigga saldhigga kumbuyuutarka kumbuyuutarka oo saacadda ayaan ku xiranaa iyadoo nidaamka la bilaabay iyo kaabsashada USB-ka oo awood loo siiyay. Waxaan dib u fureynaa daaqada amarka ee dariiqa aan soo sheegnay waxaana ku qornaa amarradan:
adb riix cusbooneysiinta.zip /sdcard/update.zip - Tani waxay nuqul ka sameyn doontaa cusbooneysiinta xusuusta gudaha ee LG G Watch.
cp /sdcard/update.zip /cache /update.zip - tani waxay u wareejineysaa cusbooneysiinta horey loogu soo guuriyey LG G Watch cache.
echo 'boot-recovery'> / kayd / soo kabasho / amar
echo '–update_package = / cache / update.zip' >> / cache / kabashada / amarka
dib u soo kabashada Hadda LG G Watch ayaa dib u bilaabi doona qaabka soo kabashada waxayna ku rakibi doontaa nooca cusub ee Android 5.0.1 waxaanan waayi doonaa Rootkii horey loo sameeyay, oo ku harsan gebi ahaanba asalka ah marka laga reebo inaan furno bootloader waana inaan xirnaa si aan u helno cusbooneysiinta rasmiga ah ee OTA. Si tan loo sameeyo waxaan qori doonnaa amarka soo socda:
Iyada oo tan Waxaad horey u cusbooneysiin doontaa LG G Watch ilaa Androiud 5.0.1 Lollipop oo si habboon loogu diyaariyey cusboonaysiinta mustaqbalka iyada oo loo marayo OTA.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Sida loo cusbooneysiiyo LG G Watch ilaa 5.0.1 Lollipop
Miyuu ku shaqeeyaa casriga (oneplus one) oo aan lahayn lolipop-ka android?
Mario Vaquerizo Garcia sawir qaade dijo
Haa, waa loogu talagalay saacadda ma aha casriga ah.
Jawaab Mario Vaquerizo Garcia
Aad baad ugu mahadsantahay casharka, si faahfaahsan ayaan ula socday laakiin waxaan ogaaday khalad yar. Amarka soo socda:
Waxay leedahay 2 calaamado oraah oo isku mid ah iyo markaad koobiyeeysid amarka qunsulka ka dibna aad dib ugu bilawdo habka soo kabashada, ma aysan cusbooneysiinin OS-ga sawir android-na wuxuu u muuqdaa barta qaylada. Isla marka aad bedesho calaamadaha xigashada ee amarkaas, waad u cusbooneysiin kartaa nooca 5.01. Kiiskeyga wuxuu ahaa qaabka LG G Watch R
Sidee ayaad u dhigeysaa xigashooyinka si ay si sax ah u cusbooneysiiso? Halkan ku dhaji khadka sababtoo ah waxay i siisay qalad isku mid ah
Ku jawaab luismirr
echo 'boot-recovery'> / cache / Recovery / amarka isku day sidan oo ii sheeg sida!
Weli waa sidii hore, waxaan helay isla guuldaradii
ami, markaan qoro: echo '–update_package = / cache / update.zip' >> / cache / recovery / command. Waxaan helaa tmp-mksh: boot-kabashada: lama helin.
Miyay taasi tahay qaladka aad heshay? qof baa yaqaan sida loo saxo ???
Saacaddayda ayaa hadhay iyada oo android jiifta iyo saddexagalka casaanka ah dusha sare mana ka soo baxdo halkaas. Ma jiraa qof gacan na siin kara?
Ma run baa inaad waraaqo heshid? Hagaag, u gudub ikhtiyaarka koowaad ka dibna bidix fartaada u dhaji si aad saacadda dib ugu soo celiso (adigoon cusbooneysiin)
Qof ma naga caawin karaa dhibaatadaas? Mahadsanid!
Waa inaad marka hore hubisaa inaad haysato rukhsad xidid, aan aragno in LG G Watch si fiican loo xididaystay. Hubinta labaad in feylka muuqaalka cusbooneysiinta aan si xun loo soo dejin.
Hubso inaad isku xirto LG G Watch inaad aqbasho ogolaanshaha khaladka USB ee mobilka, adigoo u oggolaanaya qalabka inuu ku xirmo kombuyuutarka.
Inta soo hartay waxaan cusbooneysiiyay LG G Daawasho naftayda shalay iyo wax dhibaato ah.
Dhibaatada sadex-xagalka cas ee aad ii sheegto ayaa ah inay kusii sugantahay qaabka Bootloader, adigoo u janjeeraya dhanka midig / bidix waxaad heli doontaa fursado kala duwan sida dib u bilaabida nidaamka.
Mario Vaquerizo wuxuu faallo ka bixiyay inuu xaliyay adoo qalad ku hagaajiyay amarkan. ma si fiican baa loo qoray? : echo 'boot-recovery'> / kayd / soo kabasho / amar
Waad salaaman tihiin, ma fahmin sidaad ku kasbateen, ma fahmi karo, waxaan raacay casharrada ilaa xarafka, laakiin waxaan u fiirsaday taas, waxaa laga soo guuriyay bog kale oo Ingiriis ah, iyo boggan, waan raacay isagana sidoo kale dhibaatooyin ayuu i siiyaa marka dib loo bilaabayo, waxaan helayaa saddexagalka, in kasta oo aan sameeyo wixii aad go'aansato inaad ku siibato, haddana dib ayey u bilaabmaysaa laakiin way igu sii socotaa sidii hore, ma garanayo sida looga tago saacaddayda, xaaladdii asalka ahayd, haddii aad leedahay wax fikrad ah waan ku qanacsanahay, waad ku mahadsantihiin dhamaantiin ..
Ku jawaab dharka08
Waxaan ka booday cusbooneysiinta rasmiga ah ee saacadda LG.
Waad ku mahadsan tahay wax walba.
Ami sidoo kale, mahadsanid inaad ii sheegto!
Iyo aniga. .
U jawaab digaag
waa la ogyahay hadii cusbooneysiinta xirashada android 5 ay u soo bixi doonto sony smartwatch 2?
Jawaab EDWIN AMADO CORZO
Sony waxay bilaabeysaa cashar fiidiyow ah si loo furo bootloader-ka Xperia